Daniela 11 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
11 “Tamin’ny taona voalohany nanjakan’i Dariosy Medianina,+ dia nanohana an’i Mikaela aho ka nampahery azy, sady toy ny fiarovana mafy ho azy. 2 Ary holazaiko aminao ny marina:+ “Mbola hisy mpanjaka telo hitsangana any Persa.+ Ary ny fahefatra+ hanangona harena betsaka noho ny an’ny hafa rehetra.+ Ary raha vao mahery izy noho ny harenany, dia hoentaniny ny rehetra mba hanafika ny fanjakan’i Gresy.+ 3 “Ary hisy mpanjaka mahery hitsangana ka hanjaka amin’ny faritra midadasika,+ ary hanao araka izay sitrapony izy.+ 4 Rehefa tena ao amin’ny heriny*+ anefa izy, dia ho rava ny fanjakany ka ho voazarazara manerana ny rivotra efatry+ ny lanitra.+ Tsy ho an’ny taranany+ anefa izany sady tsy hitovy amin’ilay fanjakana nentiny. Fa hongotana ny fanjakany, ka homena olon-kafa ankoatra an’ireo. 5 “Ary hatanjaka ny mpanjakan’ny atsimo, eny, ny iray amin’ireo andrianany. Handresy azy anefa izy* ka hanjaka tokoa, ary hanana fahefana lehibe noho ny azy. 6 “Ary hiray dina izy roa tonta rehefa afaka taona maromaro. Dia ho any amin’ny mpanjakan’ny avaratra ny zanakavavin’ny mpanjakan’ny atsimo mba hanao fifanarahana ara-drariny, nefa tsy ho voatanan-drazazavavy ny herin’ny sandriny.+ Ary samy tsy hahatohitra na ny mpanjakan’ny avaratra na ny sandriny. Hatolotra eo an-tanan’ny olon-kafa razazavavy, sy ireo hitondra azy any, sy ny rainy niteraka azy, ary ilay mahatonga azy hahery amin’izany fotoana izany. 7 Ary hitsangana ho mpanjakan’ny atsimo ny tsimoka+ iray avy amin’ny faka nipoiran-drazazavavy, ka ho any amin’ny tafika. Dia hotafihiny ny tanàna voaro mafy misy ny mpanjakan’ny avaratra. Ary hamely azy ireo izy ka handresy azy. 8 Ary ho any Ejipta izy ka hoentiny any ny andriamanitr’izy ireo+ sy ny sarivongana metaliny sy ny zava-tsarobidiny vita amin’ny volafotsy sy volamena, ary ireo zavatra nobaboiny. Dia hihataka amin’ny mpanjakan’ny avaratra mandritra ny taona maromaro izy. 9 “Ary hiditra any amin’ny fanjakan’ny mpanjakan’ny atsimo izy, dia hiverina any amin’ny taniny. 10 “Ary hientanentana ireo zanany lahy, ka hanangona miaramila maro be. Handroso tokoa izy ka hahery fiavy toy ny tondra-drano, ary hopaohiny ny zava-drehetra. Hiverina anefa izy, ary hientanentana hiady mandra-pahatongany any amin’ny tanànany voaro mafy. 11 “Ary ho tezitra ny mpanjakan’ny atsimo ka hivoaka hiady amin’ny mpanjakan’ny avaratra, izay hanangana tafika lehibe. Hatolotra eo an-tanan’ilay anankiray anefa izany tafika izany,+ 12 ka hoentiny. Dia hiavonavona ny fon’ny+ mpanjakan’ny atsimo, ka handripaka alinalina izy. Tsy hahay hanararaotra ny heriny rehetra anefa izy. 13 “Dia hiverina ny mpanjakan’ny avaratra ka hanangona miaramila maro noho ilay tamin’ny voalohany. Ary amin’ny fotoana farany, izany hoe rehefa afaka taona maromaro, dia ho avy izy ka hitondra tafika+ lehibe ampy fitaovana tsara.+ 14 Ary maro no hitsangana hanohitra ny mpanjakan’ny atsimo amin’izany fotoana izany. “Ary hitsangana ny taranaky ny mpandroba anisan’ny firenenao ka hitady hanatanteraka fahitana,+ nefa tsy hahavita.+ 15 “Dia ho avy ny mpanjakan’ny avaratra, ka hanorina tovon-tany*+ fanaovana fahirano sy hamabo tanàna misy manda. Ary samy tsy hahatohitra na ny sandrin’ny* atsimo na ireo miaramilany voafantina. Tsy hanan-kery hanoherana koa izy ireo. 16 Ary ilay ho avy mba hamely ny mpanjakan’ny atsimo dia hanao araka izay sitrapony, ka tsy hisy hahatohitra. Hitsangana ao amin’ilay Tany Kanto*+ izy, ary hanana hery handripahana.+ 17 Ho tapa-kevitra+ ny ho avy miaraka amin’ny tafika maherin’ny fanjakany manontolo izy. Hanao fifanarahana ara-drariny+ amin’ny mpanjakan’ny atsimo ihany anefa izy, ary hahomby.+ Ary havela hahatonga loza amin’ilay zanakavavin’ny olombelona izy. Tsy hijoro anefa razazavavy, sady tsy ho azy intsony.+ 18 Ary hitodi-doha ho any amoron-tsiraka+ ny mpanjakan’ny avaratra ka haka babo maro. Ary hisy mpitari-tafika hampitsahatra ny latsa hataon’io mpanjaka io aminy, ka tsy handatsa intsony io. Dia hataon’ilay mpitari-tafika hifotitra aminy ihany izany. 19 Ary hiverina any amin’ireo tanàna voaro mafy any amin’ny taniny izy, nefa ho tafintohina sy ho lavo, ka tsy ho hita intsony.+ 20 “Ary hitsangana handimby azy ny olona iray+ izay handefa mpitaky hetra+ eran’ilay fanjakana be voninahitra. Ho lavo izy rehefa afaka andro vitsivitsy, nefa tsy noho ny fahatezerana na ny ady. 21 “Ary hitsangana handimby azy ny olona iray hohamavoina.+ Koa tsy homen’izy ireo azy ny voninahitry ny fanjakana. Amin’ny fotoana tsy hisian’ny fanahiana+ anefa no hahatongavany, ary ho azony amin’ny teny malefaka ny fanjakana.+ 22 Ho resiny ireo sandry*+ izay manafotra toy ny tondra-drano, ka ho torotoro.+ Ary ho torotoro koa+ ilay Mpitarika+ izay mampanan-kery ny fifanekena.+ 23 Ary hiray dina aminy izy ireo, nefa hofitahiny. Ary hiakatra izy ka hahery satria hanampy azy ny firenena kely iray.+ 24 Amin’ny fotoana tsy hisian’ny fanahiana+ no hitsofohany ao amin’ny toerana tsara indrindra amin’ilay faritany, ary hanao zavatra mbola tsy nataon’ny rainy na ny razany izy. Zavatra norobaina sy nobaboina ary zava-tsoa no haparitany eo amin’ny vahoaka. Ary hitetika+ ny hamely toerana voaro mafy izy, nefa mandritra ny fotoana kely ihany. 25 “Ary hanangona ny heriny sy ny herim-pony izy, ka hitondra tafika lehibe mba hanafihana ny mpanjakan’ny atsimo. Hientanentana hiady koa ny mpanjakan’ny atsimo ka hitondra tafika tena lehibe sy mahery. Dia tsy hahatohitra tokoa ny mpanjakan’ny avaratra, satria hitetika ny hamely azy izy ireo. 26 Ary ireo mihinana ny hanim-py avy aminy ihany no handavo azy. “Dia hipariaka toy ny rano be ny tafiny, ary maro no ho ripaka. 27 “Ary ao am-pony ao, dia samy haniry hanao ratsy ireo mpanjaka roa ireo, ka hilaza lainga+ eo amin’ny latabatra+ iray ihany. Tsy hisy hahomby anefa izay hataony,+ satria amin’ny fotoana voatondro vao ho tonga ny farany.+ 28 “Ary hody any amin’ny taniny izy ka hitondra zava-tsoa be dia be. Ao am-pony ao, dia hanohitra ny fifanekena masina+ izy. Ary hahomby+ izy ka hody any amin’ny taniny. 29 “Ary hiverina izy amin’ny fotoana voatondro,+ ka hiady amin’ny atsimo,+ nefa tsy ho toy ny tamin’ny voalohany ity indray mandeha ity. 30 Ary hiady aminy ireo sambon’i Kitima,+ ka ho kivy izy. “Hiverina izy ka homelohiny+ ny fifanekena masina,+ ary hahomby izy. Dia hiverina izy ka hieritreritra an’ireo mahafoy ny fifanekena masina. 31 Ary hisy sandry* hitsangana avy aminy. Hozimbazimbain’izy ireo ny toerana masina,+ izany hoe ny tanàna voaro mafy, ary hesoriny ny fanatitra atolotra tsy tapaka.+ “Dia hanangana an’ilay zava-maharikoriko+ mahatonga faharavana+ izy. 32 “Ary ireo manao ratsy ka manohitra ny fifanekena+ dia hotaominy amin’ny teny malefaka+ mba hivadi-pinoana.+ Fa handresy+ kosa ireo mahalala an’Andriamanitra+ ka hahomby. 33 Ary hampita fahalalana amin’ny maro+ ireo olona lalin-tsaina.+ Ho lavon’ny sabatra sy ny lelafo sy ny fahababoana ary ny fandrobana izy ireo,+ mandritra ny andro vitsivitsy. 34 Rehefa lavo anefa izy ireo, dia hahazo famonjena kely.+ Ary maro no hiaraka amin’izy ireo, ka hanao teny malefaka.+ 35 Ary ho lavo+ ny sasany amin’ireo lalin-tsaina mba ho voadio sy tsy hisy loto ary tsy hisy pentina,+ mandra-pahatongan’ny fotoanan’ny farany,+ satria amin’ny fotoana voatondro+ vao ho tonga izany. 36 “Ary hanao araka izay sitrapony ilay mpanjaka, ka hanambony tena sy hanandra-tena ho ambonin’ny andriamanitra rehetra.+ Ary hiteny zava-mahatsiravina hanoherana an’ilay Andriamanitry ny andriamanitra+ izy. Hahomby izy mandra-pahatanteraky ny fanamelohana,+ satria tsy maintsy hihatra ny didim-pitsarana. 37 Ary tsy hiraharaha an’ilay Andriamanitry ny razany izy, sady tsy hiraharaha izay irin’ny vehivavy na izay andriamanitra hafa na iza na iza, fa hanandra-tena+ ho ambonin’ny rehetra kosa. 38 Ary hanome voninahitra an’ilay andriamanitry ny fiarovana mafy izy, amin’izany toerana tanany izany. Koa andriamanitra tsy fantatry ny razany no homeny voninahitra, amin’ny alalan’ny volamena sy volafotsy sy vatosoa ary zava-tsarobidy. 39 Ary hotafihiny ny tanàna faran’izay voaro mafy, ka hahomby izy noho ny fitokisany amin’andriamani-kafa. Hataony lehibe tokoa ny voninahitr’ireo manaiky azy, ka hataony ho mpitondra eo amin’ny olona maro izy ireo. Ary hozarainy ny tany, araka izay vidiny. 40 “Amin’ny fotoanan’ny farany, dia hifanosika aminy ny mpanjakan’ny atsimo,+ ary ny mpanjakan’ny avaratra kosa ho avy hamely azy toy ny tafio-drivotra ka hitondra kalesy sy mpitaingin-tsoavaly ary sambo maro. Dia hitsofoka any amin’ny tany maro izy ka hanafotra toy ny tondra-drano, ary hopaohiny ny zava-drehetra. 41 Ary hitsofoka+ ao amin’ilay Tany Kanto+ izy, ary hisy tany maro ho lasany.+ Ireto anefa no ho afa-mandositra tsy ho azon’ny tanany: Ny mponin’i Edoma sy Moaba+ ary ireo lohandohany amin’ny taranak’i Amona. 42 Mbola haninjitra ny tanany hamely tany maro izy, ary i Ejipta+ kosa tsy ho afa-mandositra. 43 Ho eo ambany fifehezany ny harena miafina, dia ny volamena sy ny volafotsy ary ny zava-tsarobidy rehetran’i Ejipta. Ary hanara-dia azy ny Libyanina sy ny Etiopianina. 44 “Hisy tatitra hampikorontan-tsaina azy+ anefa avy any amin’ny fiposahan’ny masoandro+ sy avy any avaratra. Dia hivoaka amin-katezerana mafy izy mba handripaka sy handringana olona maro.+ 45 Ary ny tranolainy, izay toy ny lapa, dia haoriny eo anelanelan’ny ranomasina lehibe sy ny tendrombohitra masin’ilay Tany Kanto.+ Hiroso ho any amin’izay hiafarany izy,+ ary tsy hisy hamonjy.+
^ A.b.t.: “hitsangana.”
^ Angamba ny mpanjakan’ny avaratra.
^ Na: “tafiky ny.”
^ Na: “tafika.”